⚡️I-Scandi Apartment⚡️eduze kweLake w/ 24h Ukuzingena 🔓
Itholakala enkabeni yeTirana; ngebanga elingaphansi kuka-15’ lokuhamba ngezinyawo ukusuka e-The Vibrant Blloku’s Nightlife, The Historical Center kanye ne-Relaxing Lake Area; uzobe useduze nakho konke kodwa kude ngokwanele ukuze ujabulele uhambo oluphumuzayo!
Ifulethi lisanda kulungiswa futhi likwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-3-4. Itholakala esitezi sesi-4 se-condo endala yenkathi yamaKhomanisi, okuzodingeka ukhwele ngayo ngezitebhisi. Ungakwazi ukufinyelela ngokushesha izindawo zokudlela ezihamba phambili zedolobha, amagumbi okuphumula, amakhefi, nama-nightclub. Ifulethi lethu elithobekile elingu-55m2, elihlelekile kahle, lizokunikeza ulwazi oluyingqayizivele enhloko-dolobha ejabulisa kakhulu eBalkan! Ungakwazi ukujabulela igumbi lokuhlala elilungiswe kabusha lesimanje, wendlala kusofa othokomele, upheke njengoba usekhishini lakho futhi uzike embhedeni othambile ngemva kokuhabula ingilazi yewayini futhi ubukele uhlelo lwakho oluthandayo lwe-Netflix nekhandlela elikhanyisiwe🕯; futhi yonke leyo mininingwane ethokomele izokwenza uzizwe usekhaya.
Enye yezindawo ezinhle kakhulu zedolobha, enokufinyelela okulula futhi okusheshayo e-City Center, e-Blloku njll.
Ukulandela isifiso sethu sokuba nolwazi oluyingqayizivele e-Tirana, singathanda ukuthi usifinyelele nganoma yisiphi isikhathi nganoma iluphi uhlobo lweseluleko noma isiphakamiso!